Olompirenena sy mpandraharaha Kroaty maneho amin’ny fomba samihafa ny fanohanany an’i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Misy fanohanana misokatra avy amin'ireo olompirenena sy mpandraharaha madinika
Voadika ny 28 Marsa 2022 12:13 GMT
Vakio amin'ny teny русский, македонски, Español, українська, Italiano, English
Hetsika tao Zagreb ho fanoherana ny ady sy ho fanohanana an'i Okraina, 18 Martsa 2022. Saripika an'ny Meta.mk, CC BY-NC 2.5..
Ity tantara ity dia mifototra amin'ny fandrakofana ôrizinaly nataon'ny Meta.mk. Dika nokiraina no averina avoaka etoana eo ambanin'ny fifanarahana mifampizara votoaty nifanaovan'ny Global Voices sy ny Orina Metamorphosis.
Olompirenena am-polony maro, ray aman-dreny omban-janaka ny ankamaroany, tao amin'ny Kianja Ban Jelačić tao Zagreb renivohitra kroaty ny Sabotsy teo, 18 Martsa, no nanao hetsika ho fanoherana ny ady, naneho ny fanohanany ny tolona fikatsahana fahalalahana ataon'ireo Okrainiàna, nampiasa ny tenifaneva #StandWithUkraine (MijoroMiarakaAminiOkraina).
Nandritra ilay hetsipanoherana, namaky fanambaràna iray ireo mpikarakara nanamelohany ny heloka an'ady ataon'ireo Rosiàna mpisetrasetra ao Okraina, raha marobe tamin'ireo Okrainiàna monina ao an-toerana ihany koa no naneho ny ahiahin-dry zareo manokana momba ny ain'ireo havany, indrindra fa ireo iharan'ny fahirano ao amin'ny tanàna amorontsiraka okrainiàna ao Mariupol.
Hetsipanoherana tao Zagreb, Kroasia ho fanohanana an'i Okraina, 18 Martsa 2022. Sary an'ny Meta.mk, CC BY-NC 2.5.
Namelatra ny sainampirenena Kroaty ireo mpandray anjara amin'ny hetsipanoherana, nihiaka tenifaneva ary nihira hira okrainiàna. Nisongadina tamin'ilay hetsipanoherana ihany koa ny sorabaventy misy sary mampitaha an'i Donbas sy ny fahirano ary daroka baomba nanjo ny tanàna kroaty tao Vukovar tamin'ny 1991. Tao anatin'ny taompolo telo farany nanaraka izany, lasa marika matanjaka ho an'ny fandravàna ateraky ny ady yôgôslavy sy ny herisetra nataon'ny fitondràna serba notarihan'i Slobodan Milošević ny faharavàna sy ny fanadiovana ara-poko nampahory ilay tanàna.
Ramatoa okrainiàna iray mipetraka any Kroasia izay milaza ny tenany ho i Ana, mijoro eo akaikin'ireo sary nahantona nandritra ilay hetsika tao Zagreb nanoherana ny ady, ny 18 Martsa 2022. Ny sary eo ankavia dia mampivady saripika iray ahitàna tranobe simban'ny baomba tao Okraina miaraka amin'ilay tilikambon-drano Vukovar voadaroka baomba. Sary an'ny Meta.mk, CC BY-NC 2.5.
Ankoatra ireo Kroaty sy Okrainiàna, nahitàna Bielôrosiàna ihany koa tamin'ireo mpanao hetsipanoherana. Nohazavain-dry zareo tamin'ireo mpandalo sy ny media fa na izy ireo koa aza dia rahonan'ilay mpanao jadona, Alexander Lukashenko, izay efa nanagadra mpanohitra an'arivony maro, toy ilay Rosiàna mpitondra jadona, Vladimir Putin. Misy amin'izy ireny no olona nahiditra am-ponja noho izy nitafy lobaka fotsy fotsiny izao sy nanao kiraro mena (lokon'ilay sainam-panjakàna manantantara bielôrosiàna natosiky ny hetsika demaokratikan'ny mpanohitra). Mponina iray avy ao Bielôrosia milaza fa i Ljudmila no niantso ny olompirenena Kroaty mba hanatevina laharana ny tolona anoherana ny devoly iraisana, “izay mety handondona ny varavaran-dry zareo koa” atsy ho atsy.
Nizara taratasy kely ho an'ireo mpandalo ny mpandray anjara tamin'ilay hetsipanoherana, misy hafatra ho fanampiana an'i Okraina. Entanin'ilay taratasy kely ny olona hitsidika ny pejy Facebook an'ny Masoivohon'i Okraina ao amin'ny Repoblikan'i Kroasia, ny Vokovoko Mena Okrainiàna ary ny sehatra www.stopputin.wtf, izay manome torohay sy fanambaràna momba ireo hetsika mitovitovy amin'izany manerana izao tontolo izao.
Vehivavy mitazona takelaka mivaky hoe “Ho ela velona i Kroasia! Voninahitra ho an'i Okraina!” ary “Ampio i Okraina ho famonjena an'i Eorôpa! Apetraho ny faritra tsy azo isidinana!” tao amin'ny hetsipanoherana ho fanohanana an'i Okraina tao Zagreb, Kroasia, 18 Martsa 2022. Sary an'ny Meta.mk, CC BY-NC 2.5.
Maromaro ihany koa ireo fandraharahàna Kroaty no naneho fanohanana misokatra ho an'i Okraina. Ny fitaratr'ireo fivarotana ao afovoan'i Zagreb dia mazàna no mampiseho marika misy ny lokon'ny sainampirenena okrainiàna.
Asongadin'ireo toerana fivarotana fahatsiarovana ao an-toerana ny sainampirenena Okrainiàna, milahatra amin'ireo sainampirenena sy marika kroaty mahazatra, raha ny toerana fivarotana sasany indray milaza fa manome ny ampahany amin'ny tombombarotra azony “ho an'ireo ankizy sy fianakaviana tandindonin-doza noho ny ady ao Okraina.”
Tsy dia mahazatra loatra any amin'ireo renivohitra Balkàna ny mahita ny fanohanan'ireo mpandraharaha madinika an'i Okraina, faritra izay tena matanjaka be ny tahotra famoretana ataon'ireo hery pôlitika mpomba an'i Kremlin any an-toerana. Ohatra, tato anatin'ny herinandro vitsy farany, tao Belgradey sy Skopje, ireo fihetsiketsehana ho fanohanana an'i Rosia nandraisan'ireo vondrona mpanao an-tendrony, izay nampiasa herisetra tamin'ireo mpanohitra ara-pôlitika sy ireo olona tsy nitovy fijery tamin'ny lasa. Ny masoivoho rosiàna tao Skopje koa dia namoaka fandrahonana hametraka ho anaty lisitra mainty ireo izay misalasala momba ny fitantaràna ôfisialy avoakan'i Kremlin.
Raha te-hahazo vaovao misimisy kokoa momba ity lohahevitra ity, jereo ny fandrakofanay manokana ny Rosia manani-bohitra ao Okraina [Angl].